Dzheyms Awe-Kuk ingenye wabahloli kunabo bonke ekhulwini XVIII. Umuntu owasihola lonke uhambo ezintathu ezweni, wathola eziningi emazweni amasha futhi iziqhingi, itilosi abanolwazi, umhloli wamazwe futhi wamabalazwe - kodwa ngubani Dzheyms Awe-Kuk. Kafushane mayelana zakhe, bheka lesi sihloko.
Isihloli esizayo wazalwa ngo-October 27, 1728 edolobhaneni Marton (England). Uyise wayengumGreki umlimi ocebile. Ngokuhamba kwesikhathi, lo mkhaya uthuthela edolobhaneni Omkhulu Ayton, lapho Dzheyms Awe-Kuk wafundiswa esikoleni sendawo. Ngenxa yokuthi umkhaya yayingeyinhle, abazali kaJakobe baphoqeleka ukuba umthume nomnini-sitolo osafunda owayehlala edolobhaneni elingasolwandle Steytese.
Njengoba umfana oneminyaka engu-18 ubudala, Dzheyms Awe-Kuk, ogama biography ngaye njengoba umuntu asebenze kanzima futhi self-wabashukumisa, Washiya umsebenzi wakhe ngesikhathi umninisitolo futhi kwakuqashwa engumfana gumbi ku ilahle umkhumbi. Waqala kanjalo-ke umsebenzi wakhe itilosi. Umkhumbi waya olwandle iminyaka embalwa yokuqala, ikakhulukazi bamhlohla phakathi London kanye IsiZulu emzini Newcastle. Wayevamile futhi ukuba abe nesikhathi ukuvakashela e-Ireland, Norway futhi oLwandle iBaltic, futhi cishe sonke isikhathi sakhe enikelwe ukuzithiba imfundo, nesithakazelo wesayensi ezifana izibalo, navigation, ukufunda izinkanyezi nokuma kwezwe. Dzheyms Awe-Kuk, zanikela esiphakeme kwenye imikhumbi yenkampani zokuhweba, wakhetha ukuba acele seaman ezejwayelekile Naval Fleet UK. Kamuva wathatha ingxenye iMpi Yeminyaka Engu-Seven ', futhi ngemva waphelela kube wamabalazwe abanolwazi futhi topographer.
Lolu hambo lokuqala emhlabeni wonke
Ngo-1766 i-British Admiralty zanquma ukubathumela ePacific Ocean uhambo yesayensi, ogama Injongo yayiwukuba observation ezahlukene mayelana nezinto zasemkhathini, kanye ezinye izibalo. Ngaphezu kwalokho, kufanele uhlole ukuthi yini ugu lweNyakatho New Zealand, Tasman ikhanda namanje evulekile 1642 waqokwa navigation Dzheyms Awe-Kuk. Nokho, Umlando wakhe, aqukethe esephindele izikhathi ezingaphezu kwesisodwa, ngalo wayedlala nendima evelele.
Dzheyms Awe-Kuk Sasuka Plymouth ngo-August 1768 umkhumbi uhambo enqamula ulwandle i-Atlantic, yena zagudla eNingizimu neMelika waphuma ePacific Ocean. umsebenzi Astronomical kwakwenziwa esiqhingini eTahiti, Juni 3, 1769, ngemva kwalokho Cook ithumele imikhumbi bebheke eningizimu-ntshonalanga, futhi ngemva kwezinyanga ezine ifinyelele New Zealand ogwini yena kahle uphenyo ngaphambi kokuqhubeka nohambo. Ngokulandelayo, ayeya maqondana Australia futhi bethola Torres Strait ngaleso sikhathi ayikaziwa ukuba baseYurophu, zagudla ke kusukela enyakatho, futhi ngo-October 11, 1970 ngomkhumbi eBatavia. E-Indonesia, bomkhankaso wahlupheka kubhubhane umalaleveva nesihudo, yimuphi nantathu kufa. Kusuka lapho, Cook abhekisa amabombo entshonalanga ngaphesheya koLwandle lwaseNdiya, waphetha Afrika futhi Julayi 12, 1771 waphindela kwelakubo.
Eyesibili uhambo lokuzungeza umhlaba
Ekwindla ka onyakeni ofanayo eBritish Admiralty futhi bafika ukubhukuda njalo. Kulokhu inhloso yakhe ukutadisha izingxenye nhlobo ngaphezulu eNingizimu Nenkabazwe kanye search for kusolwa nezwekazi eliseningizimu. Lo msebenzi waphathiswa uJames Cook.
imikhumbi emibili bomkhankaso ngomkhumbi aphume Plymouth, 13 Julayi 1772 no-30 Okthoba esesifundazweni Kapshtadte (manje Cape Town), etholakala e-Afrika eseningizimu. Ngemva kokuhlala khona kancane esingaphansi kwenyanga, Cook baqhubeka ukuhamba ohlangothini eningizimu. Maphakathi no-December, lezihambi luhlangabezane ice okuqinile, ivimbe indlela semikhumbi, kodwa Cook wayecabanga ukuthi ngeke give up. Antarctic Circle, ewela Januwari 17, 1773, kodwa ngokushesha waphoqeleka ukuba ujike imikhumbi ngasenyakatho. Kulezi zinyanga ezimbalwa ezizayo, wahambela iziqhingi eziningana Oceania nePacific, bese wenza omunye umzamo ukuze ifohle iye eningizimu. Ngo-January 30, 1774 bomkhankaso bakwazi ukufika njengendawo eseningizimu kakhulu kohambo lwakhe. Pheka ke futhi ephethwe enyakatho, bahambela lezi ziqhingi eziningana. Dzheyms Awe-Kuk, ogama biography ugcwele okwatholwa weza kulesi sikhathi ngaphesheya esiqhingini entsha. Ngemva kokuqeda izifundo esifundeni, ayeya ngasempumalanga futhi ifike ngo-December ukuze Tierra del Fuego. Lolu hambo baphindela eNgilandi 13 Julayi, 1775
Lapho beqeda lolu hambo, okwakwenza Cook edumile kakhulu kulo lonke elaseYurophu, yena wathola umfutho omusha, futhi waba ilungu iNhlangano Royal Geographical, nakho ukhishwa kuye wendondo yegolide.
Ohambweni lwesithathu emhlabeni wonke
Injongo yalolu hambo elilandelayo waqala ukufuna indlela enyakatho ntshonalanga kusukela Atlantic ePacific Ocean. uhambo uJames Cook liqalile e Plymouth, kusukela ngo-July 12, 1776 ngaphansi kokuqondisa ngohambo lwakhe kwesokunxele imikhumbi emibili. Abahloli bamazwe efika e Kapshtadt, futhi waya eningizimu-mpumalanga futhi ekupheleni 1777 wavakashela Tasmania, New Zealand nakwezinye izindawo. Maphakathi no-December ngonyaka olandelayo, bomkhankaso wavakashela Islands Hawaiian ke baqhubeka belandela enyakatho, lapho Cook wathumela imikhumbi kanye emikhawulweni Canada ne-Alaska, wawela kwe-Arctic Circle , futhi ngokushesha, ekugcineni washaya iqhwa eliqinile, waphoqeleka ukuba abuyele eningizimu.
Ngo-January 1779 Cook esesifundazweni zaseHawaii , wahlala khona isikhashana. 14 Februwari phakathi amatilosi abomdabu of isiqhingi saseHawaii kwakukhona ingxabano amatilosi amaningana, kuhlanganise uCaptain Dzheyms Awe-Kuk wabulawa lapho.
Legacy Cook - Diaries yakhe, equkethe idatha eningi ethnographic futhi ngokwebalazwe, ngokuphindaphindiwe zibhaliwe ngezilimi eziningi. Lamarekhodi namuhla okunabileko abacwaningi. Dzheyms Awe-Kuk, ogama biography ligcwele izigcawu ezimibalabala, kubhekwa omunye wamaphayona evelele kunazo zonke kanye greats ezifana Hristofor Kolumb futhi Amérigo Vespucci.
Amadoda nezingane Gurchenko Lyudmily. Izingane ULyudmila Gurchenko
Kuyini, imaski engcono kakhulu yobuningi bezinwele, ephekwe ekhaya?